Suuqa Safarka Carabta: Noocyada Dalxiiska ee Anshaxa ayaa hadda is beddelaya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Suuqa Safarka Carabta: Noocyada Dalxiiska ee Anshaxa ayaa hadda is beddelaya
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
Suuqa Safarka Carabta
RX Global, qabanqaabiyaha Suuqa Safarka Carabta (ATM), ayaa daaha ka qaaday in 2022 laga yaabo inay marqaati ka noqoto dib u soo kabashada dadka safarka ah ee miyirka qaba, ka dib faallooyin ay ka heshay wufuud ka soo qaybgalaysa 2021-ka shaqsi ahaan iyo siminaaro dalwad ah oo ku saabsan dalxiiska mas'uulka ah.
Jawaab-celinta ka soo baxday seminaarka mas'uulka ka ah dalxiiska ee 2021 ayaa lagu aqoonsaday isbeddelka suuqa ee suurtagalka ah oo leh waaritaan iyo wacyigelin bulsho oo xudunta u ah aasaaskeeda.
Huteelada, diyaaradaha, iyo meelaha loo dalxiis tago waa inay ku noolaadaan oo ay neefsadaan qiyamkooda summada.
Liiska cusub ee Google ayaa ka dhigi doona huteelada inay xaqiijiyaan aqoonsigooda deegaanka.
"Falcelinta aan helnay, waxay noo suurtagelisay in aan aqoonsanno muuqaal gaar ah oo socdaalka ah, kaas oo hadda si firfircoon u raadiya calaamado anshaxeed si uu u raaco oo uu rabo inuu arko caddayn la taaban karo oo calaamadaas ku dhaqmaysa waxa ay sheeganayso.
"Tani toosan ee suurtogalka ah waxay muujinaysaa isku-darka sifooyin loo nisbaynayo tacaburayaasha dibadda, fayoobaanta, dalxiisayaasha deegaanka, reer guuraaga dhijitaalka ah ee 'goobaha shaqada', dalxiisayaal khibrad leh iyo socdaalayaal bulsho yaqaan," ayuu yidhi. Danielle Curtis, Agaasimaha Bandhiga ME, Suuqa Safarka Carabta.
"Dabiici ahaan waxaan soo bandhigi doonaa isbeddelkan soo ifbaxaya inta lagu gudajiro dhacdadayada isku-dhafka ah ee 2022 oo si toos ah iyo qof ahaan uga dhacda Xarunta Ganacsiga Adduunka ee Dubai 8-11 Maajo 2022, oo leh daabacaad toos ah 17 iyo 18 Maajo 2022.
"Barnaamijkeena shirarka ee ATM 2022 weli waa la abuuray laakiin waxaan horay u haysanay kulamo wax looga qabanayo caqabadaha hortaagan shirkadaha diyaaradaha, hoteelada iyo meelaha kale, mustaqbalka dhow, sida caafimaadka iyo badbaadada, tignoolajiyada iyo sinnaanta caafimaadka, waxbarashada, iyo dhaqaalaha. fursad,” ayuu raaciyay Curtis.
Intii lagu jiray siminaarada duulimaadka ee ATM 2021, khubaradu waxay dareemeen inay noqon doonto nasasho gaaban oo firaaqo ah, oo u door bida hawlwadeennada qiimaha jaban ayaa noqon doona kuwa ugu horreeya ee ka soo kabsada cudurka faafa. In kasta oo ay taasi wali u ekaan karto inay xaaladdu tahay, qaybtan suuqa ee soo ifbaxday xaqiiqdii kuma koobnaan doonto hal meel, waxay u badan tahay inay doorato meelo la raro oo ay sii joogi doonto waqti dheer, oo ay ku dhex jiraan waqtiyo shaqo.
“Xiddiga hoose ee halkan aad buu isku mid yahay in kastoo. Dalxiisayaashani waxay weli doonayaan inay arkaan magacyo ay ka go'an tahay caafimaadka iyo badbaadada iyo caddaynta la taaban karo ee istiraatiijiyad waarta sida shahaado bixinta urur madaxbannaan, "ayuu yidhi Curtis.
Si loo caddeeyo baahidaas, marka loo eego xogta suuqa ee Statista, 81% ee 29,349 qaangaar ah oo la sahamiyey horraantii sanadkan, dhammaan 30 waddan ayaa xaqiijiyay inay jeclaan lahaayeen inay sii joogaan goob dalxiis oo waara, ugu yaraan hal mar 12ka bilood ee soo socda. Shan sano ka hor, kaliya 62% jawaab bixiyaasha, ayaa sameeyay dacwad isku mid ah.
Runtii, Google waxay ogaatay in ereyga raadinta "hudheelka cagaaran," uu kordhay afar laab 18kii bilood ee la soo dhaafay marka loo eego mugga. Marka, si loo caawiyo dalxiisayaasha deegaanka, Google hadda waxay aqoonsan doontaa huteelada calaamad cagaaran oo ku xigta magacooda inta lagu jiro raadinta caadiga ah. Waxa kale oo ay ku dari doontaa faahfaahinta siyaasadda ilaalinta gaarka ah ee hantida iyo hababka iyo hawlaha. Si aad ugu qalanto, huteeladu waa in ay hanti-dhawrkooda ku sameeyaan cid saddexaad oo la aamini karo.
"Tani waxay siin doontaa hufnaan dheeraad ah martida iman karta waxayna gacan ka geysan doontaa in lagu abaalmariyo hoteellada guulo deegaan oo dhab ah," ayuu yiri Curtis.
Socdaal hore u socod, dhacdada hormuudka ah ee caalamiga ah ee tignoolajiyada safarka taasoo iftiimisa tignoolajiyada ugu dambeeyay, jiilka soo socda ee safarka iyo martigelinta, golayaasha iibsadaha ATM iyo dhacdooyinka isku xidhka xawaaraha, iyo sidoo kale ARIVAL Dubai @ ATM. Iyada oo loo marayo taxane webinars golahan u heellan wuxuu daboolayaa isbeddellada hadda iyo mustaqbalka ee hawl-wadeennada dalxiiska iyo soo jiidashada iyadoo diiradda la saarayo ganacsiga kobcaya iyada oo loo marayo suuqgeyn, tignoolajiyada, qaybinta, hoggaanka fikirka iyo isku xirka heerka fulinta.
ATM 2022 waxa kale oo ay martigelin doontaa shirar shirwayne oo go'an oo ku saabsan Marxaladda Caalamiga ah, oo daboolaya duulista, hudheelada, dalxiiska ciyaaraha, dalxiiska tafaariiqda iyo seminaarka maalgashiga martigelinta ee gaarka ah. Ururka Socdaalka Ganacsiga Caalamiga ah (GBTA), oo ah ururka ganacsiga ugu horreeya ee socdaalka iyo shirarka ganacsiga, ayaa mar kale ka qaybgeli doona ATM-ka. GBTA waxay bixin doontaa nuxurkii ugu dambeeyay ee safarka ganacsiga, cilmi baarista iyo waxbarashada si loo kiciyo soo kabashada iyo taageerada kobaca safarka ganacsiga.
Suuqa Safarka Carabta (ATM), oo hadda ku jira sannadkiisii ​​29-aad, ayaa hormuud u ah, socdaalka caalamiga ah iyo dhacdada dalxiiska ee Bariga Dhexe ee khubarada dalxiiska ee gudaha iyo dibedda ka baxaya. ATM 2021 waxay soo bandhigtay in ka badan 1,300 shirkadood oo soo bandhigaya 62 wadan oo ku yaala sagaal hoolal oo ku yaal Xarunta Ganacsiga Adduunka ee Dubai, iyada oo ay soo booqdeen in ka badan 140 wadan afartii maalmood. Suuqa Socdaalka Carabta waa qayb ka mid ah toddobaadka socdaalka Carabta. #Fikradaha halkan ku gaadh
Dhacdo qof ahaaneed ee xigta: Axad, May 8 ilaa Arbacada, May 11, 2022, Dubai World Trade Centre, Dubai.